आफ्नो सजिलोका लागि नानीबाबुहरूलाई मोबाइलमा भुलाउने हाम्रो प्रवृत्तिले उनीहरूको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पार्ला ?
२४ पुस २०७६ बिहीबार
केही साताअघि मेरा एक साथीले फेसबुकमा लेखे, ‘मेरो दुर्घटना भइजाओस् र डाक्टरले भनिदिओस्– आई एम सरी ।’ आज हामी धेरैजना फेसबुक, ट्‍वीटरजस्ता सामाजिक सञ्‍जालमा मर्नेदेखि लिएर बाँच्‍नेसम्मका (अ)प्रतीज्ञाहरू पोस्ट गर्दै छौँ ।
कसैलाई गाली गर्नुपर्‍यो भने हामी सामाजिक सञ्‍जालमा व्यंग्यसाथ गाली गर्छौं । प्रशंसा गर्नुपर्‍यो भने खुसी बनाउने शब्द फालिदिन्छौँ । हाम्रा सबै खालका भावना, विचार र कुण्ठा पोख्ने ठाउँ सामाजिक सञ्‍जाल बनेको छ तर कहिलेकाहीँ यस्ता भ्रमपूर्ण सामग्रीसमेत पोस्ट गरिरहेका छौँ कि हामी असामाजिक, संवेदनाहीन, सिर्जनाविहीन र विवेकहीन भइसकेका छौँ । तर यो कुरा हामी स्वयंलाई अवगत छैन । असामाजिक भएर पनि हामी सामाजिक भएको ठान्दै छौँ । ‘स्वचालित मेसिन’ बनिसकेका हामी डिजिटल विचार बोकेर डिजिटल जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ ।
दिउँसो ११ बजेतिर इटहरी फर्किरहेको थिएँ । म बसेको सिटछेउ बच्चा काखमा लिएर एक महिला बसेकी थिइन् । उनीसँगै उनका ९/१० वर्षका छोरा पनि बसिरहेका थियो । ऊ मोबाइलमा युट्युबमा डाउनलोड भएका एनिमेटेड भिडियो हेर्दै थियो मस्तसँग । ऊ घरी भिडियो हेर्थ्यो, घरी गेम खेल्थ्यो । एकै शब्द बोलेन । धरानदेखि इटहरीसम्म करिब १७ किलोमिटर बाटोमा ऊ मोबाइलमै व्यस्त भइरह्यो । सामाजिक सञ्‍जाल र मोबाइलले हाम्रा नानीबाबुहरूलाई कसरी गुलाम बनाइरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्रै हो । सानैदेखि मोबाइलमा यसरी व्यस्त भए भने हाम्रा नानीहरूको मनमस्तिष्क कस्तो बन्ला ? वास्तविक जीवन र समाजप्रति उनीहरूको बुझाइ कस्तो बन्ला ?
केही महिनाअघि इटहरीबाट इनरुवा जाँदै थिएँ, ‘म्याजिक भेन’ मा । अगाडिको सिटमा दुई बालक आमासँग बसिरहेका थिए । ती दुई बालक पालैपालो मोबाइलमा गेम खेलिरहेका थिए । दिनरात मोबाइलमा गेम खेल्दाखेल्दा एकजनाको आँखा साह्रै कमजोर भइसकेको रहेछ । तर न त्यो बाबुलाई न त उसकी आमालाई नै त्यसबारे कुनै चिन्ता थियो ।
सोधेँ, ‘बाबु, दिनमा कति घन्टा गेम खेल्छौ ?’
‘जतिबेला पनि । दिउँसो पनि र राती पनि ।’
उसको जवाफले म छक्क परेँ ।
सामाजिक सञ्‍जाल भनिने इन्टरनेटका यी प्लेटफर्महरूले मानसिक रूपमा मात्र होइन, हाम्रो शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक जीवन नै बिथोलेको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी सिकार हाम्रा साना नानीहरू भइरहेका छन् । आजका बालबालिकाहरूले मोबाइल तथा कम्प्युटरका गेमबाहेक अरु खेल खेल्न बिर्सिसकेका छन् । घरबाहिर खेलिने खेलहरू विद्यालयका पुस्तकमा सीमित भइहाले ।
अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई मोबाइल र सामाजिक सञ्‍जालको कुलतबाट बाहिर निकाल्न पुस्तक पढ्न तथा शारीरिक रूपमा फाइदा हुने खेलहरू खेल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो तर विडम्बना यसो हुन सकेको छैन । अभिभावक, शिक्षक र बुझ्ने मानिसहरू नै यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ । बेलैमा ध्यान नदिने हो भने हामी प्राविधिक पागलपन, प्राविधिक आत्महत्या र प्राविधिक मृत्यु भोग्न विवश हुनेछौँ । त्यतिबेला सोच्न ढिला भइसकेको हुनेछ ।
केही दिनअघि बेलुका मेरी भतिजी मोबाइलमा गेम खेलिरहेकी थिई । अचानक कोठामा चमेरा पस्यो र उसकै छेउछाउ उड्न थाल्यो । धेरै समय बितिसक्दा पनि उसले आफ्नो छेउछाउ चमेरो उडिरहेको थाहा पाइन । ऊ मस्त मोबाइलमा रमाइरहेकी थिई । धेरै बेरपछि उसले चमेरो उडेको थाहा पाई र डराउँदै कोठाबाट बाहिर भागी ।
मोबाइलको दुनियाँबाहिर के भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाउनु चिन्ताको विषय हो । साना नानीहरूलाई मात्र होइन, ठूलाबडाहरूलाई पनि त्यति मतलब देखिँदैन । सानाहरूलाई बिगारेकै घरका ठूलाबडाहरूले हो । आफ्नो सजिलोका लागि नानीबाबुहरूलाई मोबाइलमा भुलाएर लत लगाउने श्रेय हाम्रै हो ।
इन्टरनेटमा हामी लाइक, कमेन्ट, सेयरको भुलभुलैयामा बाँचिरहेका छौँ । ट्‍वीट, रिट्‍वीट खोजिरहेका छौँ । सब्सक्राइब, फलोअर, लाइक, डिस्लाइकको हाँगामा झुन्डिएर आत्महत्या गर्न खोजिरहेका छौँ ।
एक वर्षअघि फाइलहरू प्रिन्ट गर्न इटहरी चोक गएको थिएँ । दुई महिला मोबाइल चलाएर बसिरहेका थिए । एकजना महिला पसलकी सञ्चालक थिइन् । अर्की युवती त्यहीँ काम गर्थिन् । मैले दुईसय जति पेज भएको फाइल प्रिन्ट गरिदिन भनेँ । उनले प्रिन्ट गर्न थालिन् । प्रिन्टरको अगाडि कुर्सीमा बसेर ती युवती मोबाइल चलाउँदै थिइन् । प्रिन्ट भएका पेपरहरू प्रिन्टरबाट भुइँमा खसिरहेका थिए । एकएक गर्दै पेपरहरू भुइँमा खसिरहे । तर, ती युवती अझै म्यासेन्जरमा व्यस्त थिइन् । पेपरहरू जताततै मिसिए ।
‘पहिला मेरो पूरै फाइल क्रमश: प्रिन्ट गरिदिनुहोस् अनि जति मन लाग्छ, मोबाइल चलाएर बस्नू’, म झर्किएँ । म झर्किएर केही हुनेवाला थिएन । पेपरहरू बोकेर बाहिरिएँ । यो घटनाले मलाई सोच्न बाध्य बनायो । प्रविधिले हामीलाई निलिसकेको हो त ? मलाई वितृष्णाजस्तो पनि भयो । केही महिनासम्म मोबाइल थन्क्याइदिएँ । सामाजिक सञ्‍जाल पनि चलाइनँ ।
मोबाइलले हामीलाई अल्छी बनाइरहेको छ । भर्चुअल दुनियाँमा हामी खुब रमाएर कुरा गर्छाैं तर वास्तविक जीवनका मानिसहरूसँग संवाद गरिरहेका छैनौँ । कुशल ज्ञान दिन सक्ने आफ्नैअगाडिका मानिस हामी चिन्दैनौँ । घन्टौँसम्म युट्युबमा ‘मोटिभेसनल भिडियो’ हेरिरहन्छौँ तर हाम्रै हजुरबुबा, हजुरआमा, बाबु, आमा र परिवारका अन्य सदस्यका कुरा सुन्न रुचि राख्दैनौँ । छरछिमेकीहरूका ‘मोटिभेसन’ लाई हामी अनावश्यक दबाब ठानिदिन्छौँ । प्रश्न उठ्छ– इन्टरनेटका सञ्‍जालले हामीलाई सामाजिक बनाएको छ कि असामाजिक ?
मेरी एक साथीले अस्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको आगोबाट जलेको एउटा जनावरको तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरेकी थिई । आफ्नै पोस्टमा ‘रोएको रियाक्ट’ समेत गरी । तर, क्याप्सनमा भने ‘हाहा’ को इमोजी थियो । हुन सक्छ हतारमा पोस्ट गर्दा ‘स्याड इमो’ को साटो ‘हाहा इमो’ भयो । तर अस्ट्रेलियाको जंगलमा डढेलोका कारणले मरेका करिब पचास करोड पशुपन्छी हाम्रा निम्ति सामान्य चुट्किलाको विषय कसरी हुन सक्छ ? मैले भनेपछि भने उसले सच्याई ।
हाम्रो धेरैभन्दा धेरै समय फेसबुक, ट्‍वीटर, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्‍जालमा व्यतीत भइरहेको छ । र, पनि फुर्सद हामीलाई छैन । यदि त्यस्तो हुँदो हो त हामी हतारमा किन प्रतिक्रिया दिन्थ्यौँ ? कमेन्ट गरिहाल्न हामीलाई किन हतार हुन्थ्यो ?
इटहरीका सम्राट गौतम मोबाइल र सामाजिक सञ्‍जालको कुलतबाट निम्तिने समस्याहरूबारे लेख पढेपछि आफ्नो आनीबानी फेर्न निर्णयमा पुगे । ‘मायावी मोबाइल’ शीर्षकको लेख पढेपछि उनले दिनमा एक घन्टा मात्र मोबाइल चलाउने प्रतीज्ञा गरे । दिनरात मोबाइलमा बिताउने उनी आजकाल साथीभाइहरूसँग समय बिताउँछन्, परिवारका सदस्यहरूसँग संवाद गर्छन् । “पहिले रातभरि मोबाइल चलाएर निद्रा पुग्दैनथ्यो । काममा पनि मन लाग्दैनथ्यो । शरीर जतिबेला पनि थाकेजस्तो हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले सामाजिक सञ्‍जालमा दिनको एक घन्टाभन्दा बढी बिताउँदिनँ । आनन्द महसुस भएको छ ।”
हामी आफू, आफ्नो देश र समाजलाई बुझेर मोबाइलको दुर्व्यसनबाट आफू र आफ्नाहरूलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ । आफू र आफ्ना प्रियजनलाई वास्तविक जीवनसँग घुलमिल गराइदिन सक्छौँ । यसका लागि पहिला घरका बुज्रुकहरू पहिला यो कुलतबाट बाहिर निस्कनुपर्‍यो । त्यसपछि बालबालिकाहरूलाई यसका खराब पक्षहरूबारे बताएर बिस्तारै मोबाइल र सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगलाई जीवनअनुकूल बनाउन सकिन्छ ।
सूचना–सञ्‍चार प्रविधिको शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्ने भनेको होइन । मोबाइल र सामाजिक सञ्‍जालविना रहनुपर्छ भन्ने पनि मेरो आशय होइन । तर, व्यवस्थापन भने अतिआवश्यक भइसकेको छ । आवश्यक पर्दा केही समयको निम्ति मात्र मोबाइल तथा सामाजिक सञ्‍जाल चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । असामाजिक, असंवेदनशील र चेतनाविहीन नभइकन मोबाइल र सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग गर्नुपर्छ । मैले भन्न खोजेको यत्ति हो ।
मोबाइल र सामाजिक सञ्‍जालको अतिप्रयोग व्यवस्थापन गर्न के गर्ने ? यसको सजिलो तरकिा छ । उठ्नेबित्तिकै मोबाइल नचलाउने । उठेपछि प्रकृतिसँग साक्षात्कार गर्नुपर्छ । व्यायाम र ध्यान गर्नुपर्छ । घरका काम भ्याउनुपर्छ । बिहानको ८ बजेभन्दा अघि मोबाइल नचलाउनु उत्तम हुन्छ । यसले हाम्रो ध्यान परिवार, काम, समाज र प्रकृतितर्फ आकर्षित हुन्छ । काममा छौँ भने पनि मोबाइल चलाउनु हुँदैन । काम सकेर थाकेको बेलामा ‘माइन्ड फ्रेस’ गर्न केही समय मोबाइल चलाउन सक्छौँ तर ख्याल रहोस् निकै थोरै समयको निम्ति मात्र ।
काम परेको बेला हामी पुन: सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग गर्न सक्छौँ । तर बिनाकाम समय काट्न मात्र सामाजिक सञ्‍जाल चलाउनु अर्थहीन हुन जान्छ । बरू पुस्तक पढ्ने, परिवारका सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्ने, कामका बारेमा छलफल गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने । ठूलाबडाहरूले नानीहरूका जिज्ञासा सुन्ने र उत्तर दिने प्रयत्न गर्ने, उनीहरूसँग खेल्ने र रमाउने । योभन्दा राम्रो अरु कुरा हुन सक्दैन । यसबाहेक सुत्ने बेलामा मोबाइल कदापि चलाउनु हुँदैन । मोबाइल आफू सुतेको ठाउँभन्दा पर राख्नु पनि एउटा तरिका हो ।
यसरी हामी मोबाइल र सामाजिक सञ्‍जालसँगै व्यवस्थित जीवन निर्वाह गर्दै आफ्नो र आफ्ना नानीबाबुहरूका जीवनमा खुसी ल्याउन सक्छौँ । अनि प्रकृित, परिवार, समाज, देश र पूरै संसारलाई नै प्रेम र अपनत्वको अँगालो मारेर खुसी र आनन्दमय जीवन व्यतीत गर्न सक्छौँ ।
अब तपाईंको पालो । मोबाइल, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगका बारेमा तपाईंको अनुभव के छ ? हामीले सामाजिक सञ्‍जालको सही प्रयोग गरेका छौँ ? हाम्रो जीवनमा इन्टरनेटको महत्त्व वा आवश्यकता के हो ? इन्टरनेटको सही प्रयोग कसरी गर्न सक्छौँ ? आफ्नो लेख/विचार nepalmag@gmail.com मा पठाउनुहोस् ।
सामाजिक सञ्जालबारे नेपाल कभरेज
साइबर अपराधको निशानामा बालबालिका
कविताः एलेक्सा, हनुमान चालिसा सुना !
आफैँले ‘डाइग्‍नोसिस’ गरिसकेको रोगको अरुले चर्चा गर्दा बदनामीको के चिन्ता भो र ? ...
सेनाको छवि, धर्ना र छद्‌म लेखकहरू